Desambra 2019 - Iaino ny fiadanan'ny Tompo - FJKM Québec - Canada
Azo inoana fa isika rehetra dia samy mitady fiadanana avokoa; indrindra ka izany fiadanana avy amin’ny Tompo izany.
Koa ireto misy fampatsiahivana tiako omena anao anio:
Efa nomen’ny Tompo antsika maimaim-poana sy feno ny fiadanany fony izy tety an-tany satria hoy Izy “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo” Jao. 14: 27.
Indrisy anefa! Tsy noraisintsika izany fidanana nomena antsika izany fa naleontsika ny fiadananan’izao tontolo izao. Hoy ny Apostoly manamarina izany “Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana; fa ny fihevitry ny Fanahy kosa fiainana sy fiadanana” Rom. 8: 6. Nifikitra tamin’izay an’ny nofo isika dia nanary ny tena fiadanana.
Tsy mbola taraiky anefa isika satria mbola afaka mandray izany fiadanana izany nohon’ny famindram-pon’Andriamanitra. Ho ny toky ho antsika avy amin’ny Mpanao Salamo hoe “Jehovah hanome hery ny olony; Jehovah mbola hitahy ny olony amin’ny fiadanana” Sal. 29: 11.
fotoanan’ny “Advento” izao, ho antsika, izany hoe, fotoana hihomanana handraisana Ilay Andrianan’ny Fiadanana. Koa samy mandinin-tena isika mba ho tena ny fiadnan’ny Tompo no hiverina sy hiainantsika indray amin’ny taona vaovao, aorian’izao volana izao.
“Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesoa dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo” Lio. 24: 36.